Wepamusoro Maficha Ekutarisa Mune A Chipatara Management Software Solution - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
HutanoTech, Chipatara Management Software
Wepamusoro Maficha Ekutarisa Mune A Chipatara Management Software Solution
Nyanzvi dzehutano dzinoshandisa kutarisira chipatara Software kugadzirisa zvinyorwa zvevarwere uye zvekurapa, kusarudzwa, ruzivo rwekuonana, zvirevo zveinishuwarenzi, marekodhi ekubhadhara, nhoroondo dzemumabara uye nezvimwe. Chipatara faira manejimendi masisitimu anokwanisa kuburitsa yakajairwa mishumo uye kuteedzera data, kusanganisira kugona kwevashandi vehutano, mari, zvinyorwa uye kugona kugona. Zvese zviitiko muchipatara zvakanyorwa madigital kubatsira nyanzvi kuteedzera basa ravo.
A kutarisira chipatara Software magwaro ekugadzirisa uye anogadzirisa dhata remurwere senge data remunhu, ruzivo rwekusangana, nhoroondo yekugadzwa, mishumo yekurapa, invoice, zvinyorwa, ruzivo rweinishuwarenzi uye nhoroondo yekurapa. Chipatara Software zvishandiso zvinobatsira kubata data kuburikidza neyepakati data yekuchengetedza system, uko zvinyorwa zvinogona kuchengetwa zvakarongeka fashoni uye kutsvaga uye kuwanikwa zviri nyore. Varwere vanogona kubhadhara mabhiri, kukumbira kugadzwa uye kuona marekodhi ekurapa muchipatara manejimendi sisitimu inosanganisira yevarwere portal inopa varwere nyore kushandisa interface yekubhadhara mabhiri, maneja ekugadzwa, kuratidza pfupiso dzekushanya kwakapfuura, uye kuona bvunzo dziri kuuya, majekiseni uye. misi yakatarwa paPC kana nharembozha.
Wepamusoro-we-mutsara kutarisira chipatara Software zvinoita kuti zvive nyore kubata zvinodiwa nemurwere maererano nekubvunzana nevanamukoti, vanovhiya, kuwanikwa kwemubhedha, mishonga, nezvimwewo.Inotendera varwere nevashandi vemuzvipatara kuti vawedzere ruzivo nezvekurapwa kwevarwere, uye inobvumidza vanachiremba nemakiriniki kuti vawedzere mishumo yavo nekuvaona pese pese vanoda.
Comprehensive hospital Software inogona kubatsira mukuita sarudzo yekugovera varwere kumakamuri akakodzera uye mawadhi, kwavanochengetwa zvakakwana uye kusarudza nezvekutengwa kwemidziyo uye zvishandiso zvaunoda kuchipatara. Mishumo pamusoro pehurongwa hwemashoko ekutungamirira inoita kuti madhipatimendi ose aongororwe uye atariswe nevakuru vakuru vechipatara.
A hospital information management system yakaoma Software suite yemapurogiramu akabatana uye mamodule anoshanda kupa ruzivo rwekutarisira mabasa kune nhamba huru yevashandisi, sekureva kunoita zita. Kutarisira chipatara Software uye masisitimu eruzivo anotsigira zvido zvehutongi zvechipatara, kusanganisira accounting, kuchengetwa kwechokwadi marekodhi evarwere uye kuronga. Kutarisira chipatara Software ndeye-yakagadzirwa-yakagadzirwa application iyo yakagadzirirwa kune yakaoma bhizimisi zvinodiwa pachipatara, nzvimbo inochengeterwa vakoti kana nezveutano nzvimbo yekuchengetedza muongororwo wechipatara, wekunze, kuwanikwa kwechiremba uye kubhadharisa kwekurapa.
Zvipatara zvikwata zvebhizimusi, kusanganisira kusangana kwakakodzera kwemari nevapi vevashandi, vatungamiriri, vatengi, vanotengesa nemakambani einishuwarenzi. Kana iwe uchida kuwedzeredza uye kuita nyore kuwana ruzivo nezvevashandi, varwere, vatengesi uye kubhadharisa nhamba, unofanirwa kuvandudza hurongwa hwechipatara Software.
Zvichienderana nezvido zvevamwe nyanzvi, kutarisira chipatara Software zvinogona kusanganisira kukwanisa kuenzanisa zvirongwa zvekuongororwa kwechiremba uye marapirwo anotemerwa navanachiremba vane zvirongwa zvezvirongwa zvekurapa uye zvinoguma kune varwere. Kutariswa kure kwevarwere chinhu chekutungamira kwekiriniki Software iyo inogona kuzivisa vanachiremba nezvekushandiswa kwemishonga, kuwanda, uye contraindications, kuunganidza data rekutanga pane varwere "hutano, uye kugadzira zvigadzirwa zvinopfekwa zvinokurudzira varwere kuisa ruzivo nezve kugara kwavo zvakanaka. Iyo sisitimu inogona zvakare kugadzira makarenda ekurapa ega uye mamwe maficha anoshanda kuti ave nechokwadi chekuchengetedza.
Semuenzaniso, chipatara manejimendi system inogona kupa mhinduro otomatiki yekukurumidza nhoroondo yezvokurapa nekuwedzera kana kubvisa zviratidzo kana kushandura rondedzero yemishonga zvinoenderana nemamiriro emurwere. Uye zvakare, chirongwa chakanyatsogadzirwa chinogona kuzivisa varwere, semuenzaniso, nezvekugadzwa kwechiremba uye zvirongwa zvemishonga zvezuva nezuva.
The Software yechipatara manejimendi system inofanirwa kutarisisa kudzikisa kana kubvisa nguva yekumirira inopedzerwa nevarwere nachiremba wavo. Pazasi pane runyorwa rweanokurudzirwa mapurojekiti ehurongwa hwechipatara manejimendi ayo anogona kushandiswa kunyoresa yakakosha yechipatara ruzivo system module kuwana data rezvehutano, kuona marapirwo, uye kuongorora nhoroondo dzekurapa uye kugadzira mishumo.
Iyo Receiver module ndiyo sevhisi unit ye kutarisira chipatara Software, iyo inobatsira kuita mashandiro ezuva nezuva nekutsvaga varwere, vanachiremba, mibvunzo ine chekuita, nguva, vanachipangamazano uye makamuri evarwere.
Chipatara manejimendi sisitimu inobatsira kuronga nekushandisa marongero, kuverengera kutaurirana pamwe nekubatana pakati pevashandi, kugadzirisa mashandiro ehurongwa, dhizaini-inotarisisa kufambiswa kwemabasa, kusimudzira masevhisi, kubata zviwanikwa zvevanhu uye zvemari uye nekuona kusingakanganisike mangetani ekupa. Varwere manejimendi masisitimu anoreva kune akati wandei eanoshanda uye otomatiki masystem ekuti vatevedze ruzivo rwevarwere, kuongororwa, kupihwa uye kudyidzana kunoitika mumasangano ehutano, makiriniki ekurapa nezvipatara. Mamwe eaya masisitimu anotarisa pane zvakajairika manejimendi manejimendi asi mamwe anotarisa pane mamwe maitiro senge mu-murwere kutevedzera uye kuongororwa kweropa.
Zvikamu zvinotevera zvechinyorwa chino zvichabatsira kunzwisisa akakosha maficha e kutarisira chipatara Software pamwe nekukwanisa kubatanidza zvakasiyana-siyana zvehutungamiri hwechipatara uye kutarisira murwere.
Kamwe kana murwere abvumidzwa, vashandisi vanogona kushandisa yako yekurapa system yekutarisa kuti murwere aripi, kuronga kuvhiya, kurongedza mhinduro yekukurumidzira uye chengetedza kurova kwemoyo kuchipatara chako. Mhinduro yevarwere yekugadzirisa inogona kuongorora kuwanikwa kwemakamuri ebvunzo uye kuongorora mafambiro ebvunzo.
Kurerutsa kunyoresa murwere; kugona kubhukidza nguva dzekugadzwa, kutarisa kugadzwa, kugamuchira marabhoritari uye kuongororwa kunoguma nenzira iri nyore uye sarudza chiremba wemurwere wega wega, vangave vachishandisa komputa, nharembozha kana chipatara. Software maitiro.
Kushanda kwakanaka kwechipatara kunopa varwere chiitiko chisina dambudziko. Kubatanidza zvinhu zvakadai se-e-tsamba, mushonga Inventory utariri uye zvirongwa zvemushonga wemurwere zvine mabhenefiti mazhinji anosanganisira kuvandudza kudzora kwemishonga uye kudzikira kwetsoka kuchipatara kunotora zvekare mafirosi. Iyi tekinoroji inoderedza mutoro kune vashandi vemuzvipatara uye inovandudza hutano hwevarwere.